Add-ons – Tagged "Energy Snacks" – ICT.com.mm
Sun Dried Sweet Plum 200g (50 PCs)K57,476
Malee Jelijoop Red Grape Coconut BitsK24,168
Maliban Wafers Cholocate (90gm)K16,094
Maliban Wafers Vanilla (90gm)K16,094
Maliban Real Double Cream-Strawberry + Vanilla (100gm)K37,360
Sun Dried Sweet Plum 200g (50 PCs)
Dried Sweet Plum No Seed Natural flavor 50 PCs in 1 pkg Nt Weight: 200g (1 PCs) Sun တံဆိပ် အစေ့လွတ်ဇီးချိုထုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝဇီးသီးအရသာအတိုင်း ချိုမြတဲ့အရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ၂၀၀ ဂရမ် အထုပ်ငယ် စုစုပေါင်း အထုပ် (၅၀)...
Malee Jelijoop Red Grape Coconut Bits
Red Grape Flavored 12 PCs in 1 pkg Net weight: 375g (1 PCs) ချိုမြတဲ့ Red Grape စပျစ်အရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Malee အမှတ်တံဆိပ် Red Grape Coconut Bits Jelijoop ဖြစ်ပါတယ်။ စားလို့ဝါးလို့ကောင်းတဲ့ ဂျယ်လီတုံးလေးတွေကို သဘာဝအုန်းသီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး...
Maliban Wafers Cholocate (90gm)
20 PCs in 1 pkg Net weight: 90g (1 PCs) ချောကလက်ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Maliban အမှတ်တံဆိပ် ချောကလက်ကရင်မ် ဝေဖာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေး၊ လူကြီးမရွေး အဆာပြေစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ပါကင်တစ်ထုပ်မှာ အလေးချိန် ၉၀ ဂရမ်ရှိ ဝေဖာမုန့်ထုပ် အထုပ် ၂၀ ပါဝင်ပါတယ်။
Maliban Wafers Vanilla (90gm)
20 PCs in 1 pkg Net weight: 90g (1 PCs) ချိုမြိန်တဲ့ ဗင်နီလာသစ်ခွအရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Maliban အမှတ်တံဆိပ် Vanilla ကရင်မ်ဝေဖာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေး၊ လူကြီးမရွေး အဆာပြေစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ပါကင်တစ်ထုပ်မှာ အလေးချိန် ၉၀ ဂရမ်ရှိ ဝေဖာမုန့်ထုပ် အထုပ် ၂၀ ပါဝင်ပါတယ်။
Maliban Real Double Cream-Strawberry + Vanilla (100gm)
50 PCs in 1 pkg Net weight: 100g (1 PCs) ဘီစကစ်ချပ်ကြားမှာ စတော်ဘယ်ရီနဲ့ ဗင်နီလာသစ်ခွအရသာ ကရင်မ်နှစ်မျိုးကို ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Maliban တံဆိပ် Real Double Cream-Strawberry + Vanilla ဘီစကစ်မုန့်ထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်၊ လူကြီးမရွေး စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ပါကင်တစ်ထုပ်မှာ ၁၀၀ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိ ဘီစကစ်မုန့်ထုပ်...
Maliban Real Double Cream-Chocolate + Vanilla(100gm)
50 PCs in 1 pkg Net weight: 100g (1 PCs) ဘီစကစ်ချပ်ကြားမှာ ချောကလက်နဲ့ ဗင်နီလာသစ်ခွအရသာ ကရင်မ်နှစ်မျိုးကို ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Maliban တံဆိပ် Real Double Cream-Chocolate + Vanilla ဘီစကစ်မုန့်ထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်၊ လူကြီးမရွေး စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ပါကင်တစ်ထုပ်မှာ ၁၀၀ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိ ဘီစကစ်မုန့်ထုပ်...
Malee Jelijoop Strawberry Coconut Bits
Strawberry Flavored 12 PCs in 1 pkg Net weight: 375g (1 PCs) ချိုမြတဲ့ စတော်ဘယ်ရီအရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Malee အမှတ်တံဆိပ် Strawberry Coconut Bits Jelijoop ဖြစ်ပါတယ်။ စားလို့ဝါးလို့ကောင်းတဲ့ ဂျယ်လီတုံးလေးတွေကို သဘာဝအုန်းသီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အရသာအတွက် သဘာဝစတော်ဘယ်ရီသီးလေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။...
Maliban Milk Short Cake (80g) (50 PCs)
Milk Flavored 50 PCs in 1 pkg Net weight: 80g (1 PCs) လူကြီးလူငယ်မရွေးစားသုံးနိုင်တဲ့ Maliban တံဆိပ် နို့အရအသာ Milk Short Cake ကိတ်မုန့် ဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ခင်းစောစောမှာ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်သလို နေ့လည်နေ့ခင်း သရေစာအဖြစ်လည်းသင့်တော်တဲ့ ကိတ်မု့န်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ် ဂျုံ၊...
Lemon Flavored 30 PCs in 1 pkg Net weight: 100g (1 PCs) Maliban အမှတ်တံဆိပ် Lemon Puff က သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ လူငယ်လူကြီးမရွေးနှစ်ချိုက်ကြတဲ့ သရေစာမုန့်ဖြစ်ပါတယ်။ နူးညံ့ပြီးအရသာရှိတဲ့ ဘီစကစ်နှစ်ချပ်ကြားမှာ ချိုမြတဲ့လီမွန်ကရင်မ်ကို ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် ကလေးလူကြီး အကြိုက်တွေ့တဲ့ အရသာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မုန့်ချည်းသက်သက် အဆာပြေစားသုံးနိုင်သလို...
Maliban Yo Yo Lemon Flavoured Biscuits 50g (60 PCs)
Chocolate Flavoure 60 PCs in 1 pkg Net weight: 50g (1 PCs) ချိုမြမွှေးပျံ့တဲ့ လီမွန်အနံ့အရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Maliban တံဆိပ် Yo Yo Lemon Flavoured ဘီစကစ် မုန့်ထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကင်တစ်ထုပ်တွင် အလေးချိန် 50g ရှိ မုန့်ထုပ် အထုပ် ၆၀...
Maliban Yo Yo Vanilla Flavoured Biscuits 50g (60 PCs)
Vanilla Flavored 60 PCs in 1 pkg Net weight: 50g (1 PCs) ချိုမြသင်းပျံ့တဲ့ ဗင်နီလာသစ်ခွအနံ့အရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Maliban တံဆိပ် Yo Yo Vanilla Flavoured ဘီစကစ် မုန့်ထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကင်တစ်ထုပ်တွင် အလေးချိန် 50g ရှိ မုန့်ထုပ် အထုပ် ၆၀...
Maliban Yo Yo Chocolate Flavoured Biscuits 50g (60 PCs)
Chocolate Flavored 60 PCs in 1 pkg Net weight: 50g (1 PCs) ချောကလက်အရသာနှစ်ခြိုက်သူတွေအတွက် ချိူဆိမ့်မွှေးပျံ့တဲ့ ချောကလက်အနံ့အရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Maliban တံဆိပ် Yo Yo Vanilla Flavoured ဘီစကစ် မုန့်ထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကင်တစ်ထုပ်တွင် အလေးချိန် 50g ရှိ မုန့်ထုပ် အထုပ်...
Gery Cheese Cracker 480g
Brand: Gery Type: Cracker Net Weight: 480 g Ingredients: Wheat Flour, Sugar, Vegetable Fat, Vegetable Oil, Cheese Powder, Milk Powder, Salt အနည်းဆုံး (၂) ခုဝယ်ယူရပါမည်။ သာယာတဲ့မနက်ခင်းလေးမှာ အိပ်ရာစောစောထမယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်၊ ပြီးရင် မနက်စာအနေနဲ့ Gery...
Want Want Rice Balls Chicken 10g (100 Pcs)
သားသားမီးမီးလေးတွေအဆာပြေကျွေးမလား Tvကြည့်ရင်းစာဖတ်ရင်းစာမလား ကိုကိုတေမမတေဘီယာနဲ့မြည်းမလားရှယ်ပဲနော် Want Want Rice Balls Chicken 10g အထုပ် ( 100 ထုပ်ပါဝင်သည်)။
Want Want Rice Balls Original 10g (100 Pcs)
သားသားမီးမီးလေးတွေအဆာပြေကျွေးမလား Tvကြည့်ရင်းစာဖတ်ရင်းစာမလား ကိုကိုတေမမတေဘီယာနဲ့မြည်းမလားရှယ်ပဲနော် Want Want Rice Balls Original 10g အထုပ် ( 100 ထုပ်ပါဝင်သည်)။
Want Want Rice Balls Black Pepper 10g (100 Pcs)
သားသားမီးမီးလေးတွေအဆာပြေကျွေးမလား Tvကြည့်ရင်းစာဖတ်ရင်းစာမလား ကိုကိုတေမမတေဘီယာနဲ့မြည်းမလားရှယ်ပဲနော် Want Want Rice Balls Black Pepper 10g အထုပ် ( 100 ထုပ်ပါဝင်သည်)။
Want Want Rice Balls Spicy 10g (100 Pcs)
သားသားမီးမီးလေးတွေအဆာပြေကျွေးမလား Tvကြည့်ရင်းစာဖတ်ရင်းစာမလား ကိုကိုတေမမတေဘီယာနဲ့မြည်းမလားရှယ်ပဲနော် Want Want Rice Balls Spicy 10g အထုပ် ( 100 ထုပ်ပါဝင်သည်)။
Haribo Fruity Basket 80g (4 Pcs)
Certified Halal Naturally good Fruity Flavor မှတ်ချက်။ ။ Haribo Fruity Basket 80g (၄) ထုပ် ပါ၀င်သည်။ About 'Haribo' Haribo, founded in 1920 in Bonn, Germany by Hans Riegel, is one of...
Gery Chocolatos Dark Chocolate Stick 240g
Brand: Gery Type: Stick Net Weight: 240 g Ingredients: Dark Chocolate, Hazelnut, Chocolate အနည်းဆုံး (၃) ခုဝယ်ယူရပါမည်။ သာယာတဲ့မနက်ခင်းလေးမှာ အိပ်ရာစောစောထမယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်၊ ပြီးရင် မနက်စာအနေနဲ့ Gery Cheese Crackers လေးကိုစားပြီး နေ့တစ်နေ့ကို အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။
Haribo Peaches 80g (4 Pcs)
Certified Halal Sweet Treats Soft & Chewy Real Peach Flavor မှတ်ချက်။ ။ Haribo Peaches 80g (၄) ထုပ် ပါ၀င်သည်။ Peachy keen and irresistible Peaches Longing for fruity indulgence? Then HARIBO Peaches...
Haribo Worms Zourr 80g (4 Pcs)
Certified Halal Naturally good Made with real fruit juice Ingredients: Glucose syrup, sugar, beef gelatinr (Halal), dextrose, carammelised sugar syrup, acidity regulators, flavour, palm oil, glazing agents. မှတ်ချက်။ ။ Haribo...
Haribo Worms 80g (4 Pcs)
Nutrition Energy: 110kcal Protein: 2g Carbohydrate: 25g Total Dietary Fibre: 1g Total Sugar: 14g မှတ်ချက်။ ။ Haribo Worms 80g (၄) ထုပ် ပါ၀င်သည်။ Doubly fruity and singularly delicious Worms Which side...
Gery Crunch Roll Vanilla 288g
Brand: Gery Type: Crunch Roll Net Weight: 288 g 1 Package: 24 g x 12 Pcs အနည်းဆုံး (၂) ခုဝယ်ယူရပါမည်။ သာယာတဲ့မနက်ခင်းလေးမှာ အိပ်ရာစောစောထမယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်၊ ပြီးရင် မနက်စာအနေနဲ့ Gery Cheese Crackers လေးကိုစားပြီး နေ့တစ်နေ့ကို အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။
Haribo Star Mix 80g (4 Pcs)
Jelly Type Mixed Flavor မှတ်ချက်။ ။ Haribo Star Mix 80g (၄) ထုပ် ပါ၀င်သည်။ Explore endless worlds of flavour! Starmix Starmix offersadelicious voyage of discovery through the colourful HARIBO...